पा’यल्सको स’मस्याले है’रान हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् मु’क्ति – Dailny NpNews
पा’यल्सको स’मस्याले है’रान हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् मु’क्ति
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २२, २०७७ समय: २२:५३:३१
काठमाडौँ / चाडपर्वमा मिठोमसिनो, चिप्लो-चाप्लो, अमिलो-पिरो खाइयो। चाडपर्वमा मिठो-मसिनो खान पनि डराउनुपर्ने ! नभए त पा’यल्सले सताइहाल्छ।हो त, अहिले धेरैको साझा पि’डा बनेको छ, पा’यल्स । यो अस्वस्थ्यकर खाना र निस्क्रिय जीवनशैलीका का’रण पा’यल्सको पी’डा झेल्नुपरेको छ। जंकफूड, मिठाई, मदिरा, म’सलेदार खाना आदि पा’यल्सको का’रण बनेको छ।
पायल्स यस्तो स’मस्या हो, जसले हाम्रो दिनचर्या नै प्रभावित बनाउँछ । पाइल्स भएमा मल त्याग गर्दा असहय पिडा हुने, मलद्वारबाट र’गत बग्ने, म’लद्वारा वरिपरि गाठो वा मासुको डल्लो महसुस हुने, चिलाउनु, रातो हुने तथा पो’ल्ने लगायतका ल’क्षण देखिने गर्दछ।
पा’यल्सको पी’डा**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
ठूलो आ’न्द्राको अन्तिम भागमा म’लद्वार हुन्छ । लगभग चार सेमी इञ्ज लामो म’लद्वार सुन्निएमा पा’इल्स हुने गर्छ। पा’यल्स भएमा मलद्वारको आ’न्तरिक (भित्री) भाग तथा बाह्य भागमा मासुको ड’ल्लो जस्तो गाँठो पर्ने गर्छ । जहाँबाट बेलाबेलामा र’गत निस्कने गर्दछ । दिसा बस्दा थप दवाव सिर्जना भएमा त्यहाँबाट मा’सुको डल्लो समेत निस्कने गर्छ । यस्तो अवस्थामा असहय पि’डा हुन्छ।पायल्स दुई प्रकारको हुन्छ, आन्तरिक र बाह्य ।
आन्तरिक पा’यल्स मलद्वारको भित्री पट्टी दुई/तीन सेन्टिमिटर माथि हुन्छ। आन्तरिक पा’यल्स पिडारहित हुन्छ ।
जबकी बाहिरी पा’इल्स मलद्धाराको बाहिरी भागको दुई/तीन सेन्टीमिटर तल हुन्छ। मलद्धारको भाहिरी टिस्यूमा मा’सुको ससाना डल्लो हुने भएकोल भएकोले यो बढी पि’डादायक हुन्छ ।तथापी, आन्तरिक पा’यल्सलाई यसको जटिलता एवं आकारका अनुसार चार ग्रेडमा वर्गीकृत गरिएको छ।
यो पायल्सको सुरुवाती स्टेज भएकोले यसलाई सुरुवाती चरण भनिन्छ, जसमा कुनै प्रकारको लक्षण देखिदैन र पि’डा पनि हुँदैन । परिणामस्वरुप, यो स्टेजमा विरामीलाई आफूलाई पा’यल्स भएको छ भन्ने सम्म पनि ज्ञान हुँदैन । बरु मलद्वार भित्रको टिस्यू हल्का सुन्निने भएकोले विरामीलाई छाला खस्रेको जस्ता महसुस हुनसक्दछ । र, दिसा बस्दा जोड लगाएको खण्डमा थोरै रगत निस्कने गर्दछ । तथापी, यो पा’यल्स शरीर भित्रै हुने गर्दछ ।
यस चरणमा मलद्वारा पहिले भन्दा बढी सुन्निनुका साथै मल त्याग गर्दा र’गतको साथमा मा’सुको डल्ला बाहिरतिर निस्कन थाल्दछ ।र, हातले भित्र पसाएको खण्डमा उक्त मा’सु फेरी भित्र पस्ने गर्छ । यसमा मा’सु बाहिर निस्कने हुँदा यो पहिलो चरणमा थोरै पिडादायी हुनसक्छ।
यस चरणमा मा’सुको साथमा र’गत पनि निस्कने भएकोले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिइने गरिन्छ । यस चरणमा मा’सु बाहिर नै रहने गर्दछ। र निकै प्रयास गरेपछि मात्र उक्त मा’सु भित्र छिर्ने भएकोले यो दुई चरण भन्दा बढी पी’डादायक हुने गर्छ।
जब तेश्रो चरण ख’राब हुन्छ, तब चौथो चरणमा पुग्दछ । यो चरणमा अवस्था जटिल बन्दछ । जसका का’रण मल त्यागको समयमा असहय पी’डा हुने गर्छ । र मल त्यागको समयमा र’गतसँगै मा’सु पनि बाहिर निस्कने गर्छ । बाहिरै झु’ण्डिएर बस्छ । र, यस चरणमा संक्रमणको ख’तरा पनि बढी हुन्छ।
किन हुन्छ, पा’यल्स ?
प्राय:जसो कब्जियतका का’रण पा’यल्स हुने गर्छ । कब्जियत भएमा म’ल त्याग गर्दा दवाव उत्पन्न हुन्छ। जसले गर्दा मलद्वार वरिपरिको नशा फुटेर तथा त्यहाँबाट र’क्तश्राव भएर न’शा सुन्निने गर्छ । र, पा’यल्स हुने गर्छ । त्यसबाहेक, ग’र्भावस्था, मो’टापना , ग’लत खानपान, खानपानमा पोषक तत्वको कमी, क’डा व्यायाम, लामो समय एकै ठाउमा बसेर काम गने बानी, शरीरमा तरल पदार्थको कमी, डायरिया, औषधीको अनावश्यक प्रयोग, आणुवंसिक का’रण लगायतले पनि पायल्स हुने गर्छ ।
पा’यल्स हुँदैमा आ’त्तिहाल्नु पर्दैन । शल्यक्रिया तथा घरेलु औषधीको प्रयोग तथा लेजर उपचारद्वारा पनि पा’यल्स निको पार्न सकिन्छ ।त्यस्तै, अव्यवस्थित जीवनशैली गलत खानपानका का’रण पनि पा’यल्स हुने भएकोले जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाएर तथा सन्तुलित आहारको सेवन गरेर पनि पाइल्सलाई निको पार्न सकिन्छ। विशेषगरी फाइबरयुक्त खानेकुराका साथमा हरियो सागसब्जी, ड्राई फ्रुट्स, आइरन युक्त खाद्य पदार्थ तथा पानीको सेवन गरेर पनि पा’यल्सको स’मस्यालाई न्युन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, मैदा, जंकफुड, धुमपान, म’दिरा, दूधजन्य पदार्थ, मा’सुको, तेल, मसलेदार खाद्य पदार्थबाट बचेर पनि पायल्सबाट बच्न सकिन्छ।